Palpasa Cafe: Episode - 5
Aakar Anil March 21, 2009
Listen to 5th episode of Palpasa Cafe.
युद्ध कस्तो हुन्छ ? के यहाँहरुलाई युद्ध कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ ? के यहाँले युद्ध को प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ ? जनयुद्ध का नाउँमा नेपाल मा कति युद्ध भए, के तपाईसँग केही तथ्य छ ? माओवादी जनयुद्ध का बेला नेपाली जनताले कति सास्ति भोगे, सायद यो शब्द मा वर्णन गर्न सकिँदैन ।
माओवादी जनयुद्धको दौरान हामी दैनिक पत्रिकामा लाशहरु पढ्थ्यौँ, रेडियोमा लाश नै सुन्थ्यौँ अनि टिभि मा लाश नै हेर्थ्यौँ, यसबाहेक धेरै पटक प्रत्यक्ष अनुभव पनि सँगालिएको छ, त्रासै त्रास मा रात काटिएको छ । त्यही युद्धका कारण हजारौँ घरबारविहिन भए, धेरै ले आफ्ना गुमाए । तपाईलाई युद्ध को अनुभव छ कि छैन थाहा भएन तर रेडियोवाचन को यो बसाइमा पल्पसा क्याफे मा युद्ध को वर्णन गरिएको छ । सन् २००५ को मदनपुरस्कार विजेता नारायण वाग्ले को पल्पसा क्याफे को यो अंक मा हाम्रा चिरपरिचित प्रस्तोता अच्युत घिमिरे त्यही हामीले भुल्न लागिसकेको युद्ध को बयान गर्दैछन् ।
चित्रकार दृश्य जिल्ला सदरमुकाम आइपुगेको प्रसंग सँगै आज को बाचन सुरु हुन्छ । दृश्य एउटा होटलमा बास बस्छ, तर त्यसै रात सदरमुकाम माओवादीहरुले आक्रमण गर्छन । रातभर, भिडन्त हुन्छ जिल्ला सदरमुकाममा, होटल मा बसेको दृश्य पनि अलिकति ले मात्र बाँचेको छ, उसको पाइन्टलाई छेडेर गोली गएको छ । जेल फोडिएको छ, बैंक लुटिएको छ, सरकारी कार्यालय कुनै सद्दे छैन, गोली खोका र बम यत्रतत्र छन्, मानिसहरु त्रसित छन्, पत्रकारहरु यसै विभत्स घटनाको रिपोर्टिङ मा व्यस्त छन् । आक्रमण ले कति तहसनहस भएको छ, कति क्षति भएको छ, अनि के के भएको छ, एक एक कुरा वर्णन गरिएको छ यो अंकमा । आफैँ युद्ध मा पुगेको अनुभव हुन्छ, सदरमुकाम आक्रमण भएको कुरा सुनिरहँदा । युद्ध ले तहसनसह भएको सदरमुकाम छाडेर, दृश्य मित को गाउँतिर लाग्छ ।
दृश्य को मित बा ले पनि घरमा बास दिएनन्, दृश्यको मित मारिएको जम्मा १ महिना भएको रहेछ । दृश्यका मितबा अनि मितआमा ले पनि बस भनेनन् । दृश्यको मित रेशम मारिएको १ महिना भएको छ, अनि मितबा र मितआमा को कुराले दृश्य मर्माहत हुन्छ । उ आफ्नो बिगत सम्झन्छ, मित सँगै खेलेका, चलेका क्षणहरु । उ विगतमा हराउँदै जान्छ, हरेक क्षणहरु आँखा अगाडि आएर नाच्न थाल्छन् । उसलाई यति सम्म थाहा छ कि, उसको मित पुलिस भएको थियो ।
मित बा र मितआमा ले बास नदिएपछि दृश्य “ठूले” हरिलाल दमाइको पसलमा बास काट्न पुग्छन् । हरिलाल दमाइ को मुखबाट दृश्य ले गाउँको हालचाल सबै बुझ्छ, निकै विरक्तलाग्दो छ स्थिति । ठूले को पसलमा खाँदै गर्दा, मितबा आएर ठूलेलाई आफ्नो मितछोरो आ’को देखिस् भनेर सोद्धछन् तर ठूले छैन भन्छ, दृश्य भने फेरी मितबा कै पछि लाग्छ ।
सानी केटि सँग भेट हुन्छ, दृश्यको ! त्यो ५ वर्षकी सानी केटी आफ्नो मितिनीलाई भेट्न जाँदैछे तर उसकी मितिनी भर्खरै भएको बम बिस्फोटमा मरिसकेकी छ । लेखकले, सानीकेटी र दृश्यको बिच निकै रमाइलो संवाद गराएकाछन् । सानीकेटी ले आफ्नै मितिनी को घर जान कर गर्छे, उ पनि साथै लाग्छ तर उसकी मितिनी भर्खरै भएको बम बिस्फोटन मा परेर मरिसकेकी छ । काठमाडौँ जाउँ भन्दा त्यो सानी केटि भन्छे, “राजालाई त मार्ने ठाउँ” ।
दृश्य एकनास ले हिँडिरहेको छ तर उसलाई आफ्नै प्रतिरुप ले तर्साइरहेको छ, बाटोभरि । बाटो मा भारतिय सेनामा कार्यरत लाहुरे भेटिन्छ, सँगै हिँड्छन । तर अब लाहुरे भारत जान पाउँदैन, उसलाई जनयुद्ध लड्न को लागि बाटो बाटै दबाब दिइन्छ, लाहुरेले जति नै कष्ट गरेपनि, उनीहरुले छाड्दैनन् । दृश्य अगाडि बढिरहन्छ । १५८ औँ पृष्ठमा आएर आज को वाचन सकिन्छ ।
हाम्रो युद्ध को कालखण्डलाई वर्णन गर्न सफल, नारायण वाग्ले को पल्पसा क्याफे को यो अंकलाई ध्यान दिएर, अच्युत घिमिरे को वाचन सुन्नुहोस् । यहाँ शब्द मा बयान गर्न कठिन छ, तर तपाई ले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विगतलाई । सायद, मैले अनुभव गरेका कुरा यहाँ म लेख्न सक्दिन, तपाईहरु यो अंकलाई अनुभव गर्नुहोस्, के कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया व्यक्तगर्नुहोस् । यहाँहरुले सिधै प्रस्तोता अच्युत घिमिरेलाई [email protected] मा ईमेल गरेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) March 22, 2009 at 3:21 AM
thanks to aakar ji n achyut ji ..
Eternal March 22, 2009 at 6:34 PM
Thank you so much for the next episode...Sani nani ko sanga sambad..jasari achyut dai le...aafu nai "ma" patra ra aafai sani nani bannu bhayera garnu bhayeko cha....tyo malai dherai nai ramro lagyo...
Dherai dherai dhanya bad aakar
दीपक जडित April 7, 2009 at 5:24 AM
आकारजी , बिचमा केहि भागहरु पढ्न छुटेको हुनाले फेरि रिफ्रेस गर्दै अघि बढ्नलाई सुरु देखि नै पढ्दै आएँ । तपाईंलाई जति धन्यवाद दिएपनि कम हुन्छ र पनि धेरै धन्यवाद !